Книга AMIN’NY ANDRO. Ny mahamenatra - читать онлайн бесплатно, автор СтаВл Зосимов Премудрословски
AMIN’NY ANDRO. Ny mahamenatra
– Inona no mampiavaka ny Rosiana sy ny Amerikanina ary ny Eropeana?
– Ary raha miaina fa mieritreritra lojika, tsy diso isika. – Namaly ny tenako aho ary nandeha. Te hisotro aho – mampatahotra ary manaikitra. Handeha aho, ka handeha amin’ny alàka mankany amin’ny zaridaina misy fefy vy vita amin’ny orinasa indostrialy. Hitako fa efa maizina ny andro. Reko fa amin’ny lafiny iray amin’ny fefy dia misy olona mangina, saingy nanindrona, tsy nahoraka. Toy izany koa aho namaly. Hitako fa misy kitapo ovy iray mandeha avy amin’ny zavatra hafa any amin’ny ilan’ny fefy, nofenoina zavatra koa amiko. Niparitaka aho, ary ny kitapo dia nikasika ny fialan’ny alika tsy fantatra iray, tavela tsy ela teo anoloako. Niakatra tany aminy aho, nandinika azy hafahafa, ary, tsy niahiahy na nieritreritra zavatra hafa, namaha azy, ary tao …, tao?! Teo izy dia feno fonosana, ary nasiany sosotra mifoka. Raha tsy nieritreritra momba na inona na inona aho dia nalaiko ilay izy, nalaiko ilay paoma nataon’i Adama ary natsipiko teo an-tsoroko izany, dia nidina haingana aho tamin’ny hafainganam-pandehan’ny Ferrari nankany amin’ilay tranom-bahoako, ary nandevona ilay saosy tsy hay hadino izany.
– Aiza ny kitapo? Nanontany i Kuzya
– Ary natsipinao izy? – Namaly ilay fanontaniana ny mpiara-miasa hebreo.
– Ary ianao nanao koka?
– Ary ianao..??
Mitsangana izahay, hany ka saika hiasa eo amin’ny lohan’ny antokon’ny miaramila izahay ary mifoka sigara eny am-baravarana. Avy eo dia nisy ny krizy any amin’ny firenentsika tsy milamina. Mafy ny fotoana, sigara telo fonosana isam-bolana. Ary ny anjarantsika dia eo akaikin’ny fiompiana kolontsaina “Bull udder” ary marina izany. Dia mitsangana ary mifoka izahay, ary mijanona avy ao aorinan’ny hazo ny Baba Yaga. Marina, Jadwiga no anarany. Eny. -, mieritreritra izahay, – akoho kely ary, na eo aza izany dia manonofy momba ireo kirihitra miaraka amin’ny mavitrika izahay. Ary niantsoantso izy, nanelingelina ny fisainantsika. Marenina izy ary jamba.
– Oh, miaramila, mamaly, awww?!
– B, adala, inona no henonao, antitra? Roanjato sy valonjato santimetatra no lavitra anao?! Ao ambadiky ny fefy!!
– Bes! – dia namaly indray ny tompon’andraikitra. – Inona no ilainao, lazao, na mandeha leoty karoty?
– Izaho, hoy ny zoky taloha. – mila manangona entana amidy ianao, – ary mitsiky, – kisoa kely, Borusenka. Napetrako teo ambony latabatra ny moonshine, omeo ahy mihitsy izany.
– Misy anao izao? Nanontany aho, lehilahy iray izay nahita kisoa afa-tsy tany amin’ny zoo, fa noho ny antony iray dia nantsoina hoe hippos izy ireo.
– Dras!! Inona no nitondra anao?? Namerina tamin’ny feo iray aho.
– Homeko anao ny kisoa sasany … – raha tsy henoina na tsy mahazo ny fanontaniako dia hoy ilay taloha.
– Nandeha teny an-dalana izy, nanidina agaric ate.. – Nanoro hevitra aho, teo anoloan’ny mpiara-miasa amiko.
– Ary aiza no misy anao? – nanontany namana
– Ary tonga amin’ny vohitra ianao ary manontany an’i Yadu, moana ny lalantsika.
– Ahoana? Arsenika, sa inona? Nikiakiaka tao an-tsofina aho, toy ny mikrô.
– Tsia, malalako! Hehe.. Anontanio an’i Yad Vigu!!
– Ary rehefa ho avy? – nanontany ny mpiara-dia taminy.
– Ary amin’ny faran’ny herinandro, amin’ny mitataovovonana! Tsy vokaiko fotsiny izy. – Namaly ny renibeny ary nandeha nanangona kirihitra maintso tsara tarehy.
– Ry namako, namono ny kisoa va ianao?
– Mazava ho azy. Nipetraka tany amin’ny tanànan’ny toeram-pambolena.
– Tsara, vehivavy antitra? – nanomboka ny namana. – aiza ny kisoa?
– Eny, kisoa izy ary malalany ao amin’ny trano firaketana. Namaly izy ary niditra tao anaty efitrano. Maka fehy antsasaky ny zato metatra izy. Mivelatra izany ary mamoaka sabatra tamin’ny taonjato fahadimy A.K, toa tamin’ny vanim-potoana. Rusty, harafesina ary zatra mifatotra amin’ny kasety elektrika.
– Inty, ry zanako, ity no farany nataoko Joseph, niverina tany amin’ny World War I Grant. Rehefa tao amin’ny orinasa mpanao hena dia nitaona sy nanapaka ny rehetra izy: na omby sy akoho aza.